Tao amin’ny Sahan’i Edena, dia ny menarana no “namitaka” an’i Eva tamin’ny fihinanana voankazo anankiray. Nohaniny izany ary avy eo dia nomeny an’izany ny vadiny, ka nahatonga azy ireo nahalala fa nitanjaka izy ireo. Karazana menarana inona no afaka miresaka, ary inona no idiran’ny voankazo anankiray amin’ny mitanjaka?
Ankehitriny ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon’ny TOMPO andriamanitra tao amin’ny saha. Dia hoy izy tamin’ny vehivavy, Hay, andriamanitra no niteny hoe, Aza ihinananareo ny hazo rehetra eo amin’ny saha?
Ary rehefa hitan’ny vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo, sady mahafinaritra ny maso, ary hazo mahatsiriritra hampahahendry, dia nangalany ny voany, dia nihinanany, ary nomeny koa ny vadiny teo anilany; ka nihinana izy.
Dia nahiratra ny mason’izy roa, ary fantany fa nitanjaka izy ireo; ary niaraka nanjaitra ravin’aviavy izy ireo, ka nanao sikina ho an’ny tenany.
Dia hoy ny TOMPO andriamanitra tamin’ny menarana, Satria nahavita an’izany ianao, dia voaozona amin’ny biby fiompy rehetra ianao, ary amin’ny bibidia rehetra ao amin’ny saha; ny kibonao no handehananao, ary vovo-tany no hohaninao amin’ny androm-piainanao rehetra:
Ary izaho hametraka fifandrafesana eo aminao sy ny vehivavy, ary eo amin’ny taranakao sy ny taranany; izy hanorotoro ny lohanao, ary ianao hanorotoro ny voditongony.
Io no ota voalohany voasoratra ao amin’ny Baiboly. Ilay fetsy indrindra tamin’ny bibidia rehetra, ny menarana, no “namitaka” an’i Eva tamin’ny fihinanana voankazo voarara anankiray. Nohaniny izany ary avy eo dia nomeny an’izany koa ny vadiny, izay nahatonga azy ireo hahalala fa nitanjaka izy ireo.
Ireo fanontaniana miharihary dia: Ahoana no ahafahan’ny menarana iray hiresaka? Inona no idiran’ny paoma iray amin’ny mitanjaka? Ary, aiza no hahavitan’ny taranaky menarana an’izany rehetra izany?
Ny Baiboly dia milaza fa ny menarana no “fetsy” indrindra amin’ny bibidia rehetra. Tena nitovy tamin’ny olombelona izy, hany ka afaka nandeha izy, niresaka, ary nanana firesaka hendry mihitsy aza. Rehefa avy namitaka ny vadin’i Adama izy, vao nanozona azy ho bibilava iray Andriamanitra, fa tsy talohan’ny nahavitan’ilay fanimbàna sy nambolena an’ilay taranaka.
Ny Baiboly dia milaza ao amin’ny Genesisy 3:15 fa nanana taranaka iray ny menarana, ary Andriamanitra dia nametraka fifandrafesana teo amin’ireo taranaka anankiroa ireo. Miharihary, fa ny taranaky ny menarana no nifangaro tamin’ny taranaka ara-boajanaharin’i Eva talohan’ilay fanavahana. Ahoana no hahatonga an’izany rehetra izany ho vokatry ny fihinanana paoma iray? Avy eo, andininy vitsy aty aoriana, “Adama dia niantso ny anaran’ny vadiny hoe Eva; satria izy no renin’ny olombelona rehetra.” Mariho fa izany dia tsy milaza fa Adama no rain’ny olombelona rehetra.
Misy “voa” samihafa ao amin’ny Baiboly. Mazava ho azy, misy ny voa iray ara-bakiteny, tahaka ny paoma iray, izay maniry ary hanina ho sakafo. Misy ihany koa ireo voa izay oharina amin’ireo asantsika, na ireo asa ara-boajanahary izany toy ny fiompiana sy ny fandraharahana, na ireo asa ara-panahy toy ny fanaovana fahagagana sy ny fitoriana ny Filazantsara. Avy eo, dia misy ny voan’ny kibo, izay oharina amin’ny fananan’anaka sy fiterahan-jaza.
Ny fihinanana voa ara-bakiteny iray ve dia mety hanome an’i Adama sy Eva ny fahalalana fa nitanjaka izy ireo? Na, mila firaisana ara-batana eo amin’ny lehilahy iray sy vehivavy iray ve ho azy ireo ny fahalalana hoe nahoana izy ireo no tsy maintsy manarona ny ampahany sasany amin’ny vatany?
Inona marina no nitranga tamin’io andro io tao amin’ny Saha ka nahatonga ny olombelona rehetra ho lavo?
Tahaka ny Taranaky ny vehivavy izay famokaran’Andriamanitra Izy tenany ara-bakiteny ao amin’ny nofon’olombelona, dia toy izany koa ny taranaky ny menarana no fomba ara-bakiteny izay hitan’i Satana fa hahafahany manokatra ny varavarana ho an’ny tenany hidirana ao amin’ny firazanan’olombelona. Tsy azon’i Satana natao (satria dia fanahy iray NOFORONINA fotsiny izy) ny namokatra ny tenany tamin’ny fomba namokaran’Andriamanitra ny Tenany, noho izany ny tantaran’ny Genesisy no milaza hoe ahoana no namokarany ny taranany sy nampidirany na nanatsofohany ny tenany tao amin’ny firazanan’olombelona. Mbola nampahatsiahy koa fa Satana dia nantsoina hoe ny “menarana.” Ny taranany na ny fitsofohany tao amin’ny firazanan’olombelona no resahintsika.
Talohan’ny mba nananan’i Adama fahalalana ara-nofo an’i Eva, dia ny menarana no nanana an’io fahalalana io talohany. Ary ilay anankiray teraka avy tamin’izany dia i Kaina. Kaina dia avy tamin’ny (naterak’i, lahimatoan’i) io “Ilay Ratsy,” (I Jaona 3:12)
…Ny marina amin’ilay zavatra dia i Eva no nanana tao an-kibony zanakalahy ANANKIROA (kambana) avy tamin’ny fanatsofohana MISARAKA. Nitondra kambana izy, tamin’ny fananana an’i Kaina indray andro talohan’ny an’i Abela.
Dia nahiratra ny mason’izy roa, ary fantany fa nitanjaka izy ireo; ary niaraka nanjaitra ravin’aviavy izy ireo, ary nanao sikina ho an’ny tenany.
[Ahoana no nahafantaran’izy ireo fa mitanjaka izy avy tamin’ny fihinanana voankazo anankiray?]
Dia hoy ny TOMPO Andriamanitra tamin’ny vehivavy, Inona izao nataonao izao? Ary hoy ny vehivavy hoe, Ny menarana no namitaka ahy, dia nihinana aho.
[Nanana taranaka iray ny menarana. Miharihary, fa tsy manondro bibilava iray izany.]
Ary i Adama dia niantso ny anaran’ny vadiny hoe Eva; satria izy no renin’ny olombelona rehetra.
[Nahoana i Adama no tsy nantsoina hoe rain’ny olombelona rehetra?]
Ary nahalala an’i Eva vadiny i Adama; dia nanana anaka izy, ary niteraka an’i Kaina, ka nanao hoe, Nahazo zazalahy tamin’ny TOMPO aho.
Ary niteraka an’i Abela rahalahiny indray izy. Ary i Abela dia mpiandry ondry, fa i Kaina kosa dia mpiasa tany.
[Ny aina rehetra dia avy amin’Andriamanitra, na teraka ara-dalàna izy na tsy ara-dalàna. Tsy mahay mamorona aina i Satana.]
Izay zanak’i Enosy, izay zanak’i Seta, izay zanak’i Adama, izay zanak’Andriamanitra.
[Aiza ilay Kaina teraka voalohany ao amin’ilay taranak’i Adama?]
I Jaona 3:12
Tsy ho tahaka an’i Kaina, izay avy amin’ilay ratsy, ka namono ny rahalahiny. Ary nahoana no namono azy izy? Satria ratsy ny asany, fa marina ny an’ny rahalahiny.
[Andriamanitra dia namorona an’i Adama tahaka ny Endriny. Avy taiza ilay faharatsian’i Kaina, ary avy taiza ilay fahamarinan’i Abela? Ireo toetrany dia nolovainy avy tamin’ireo rainy.]
Ary i Enoka koa, ilay fahafito avy amin’i Adama, dia efa naminany ny amin’ireny, nanao hoe, Indro, tonga ny Tompo miaraka amin’ireo masiny an’alinalina,
[Tsy misy n’aiza n’aiza ao amin’ny Baiboly hoe i Kaina dia ao anatin’ny taranak’i Adama.]